रोकियो स्वैच्छिक अवकाश कार्यक्रम, के भन्छन् राजस्व सचिव ? - inaruwaonline.com
रोकियो स्वैच्छिक अवकाश कार्यक्रम, के भन्छन् राजस्व सचिव ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र २१, २०७४ समय: ८:२६:०९
काठमाडौं, २१ चैत । सरकारले कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकेको छ । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले तत्कालका लागि स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकिएको बताए । कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन नहुँदासम्म अवकाश प्रक्रिया स्थगित गरिएको र संशोधनपछि रोकिने उनले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।